Lammiiwwan Eertiraa 6,200 guyyaa 37 keessatti gara Itoophiyaa ce’an - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Gaafa Afrikaa Lammiiwwan Eertiraa 6,200 guyyaa 37 keessatti gara Itoophiyaa ce’an
Lammiiwwan Eertiraa 6200 ol ta’an guyyaa 37 keessaatti daangaa qaxxaamuruudhaan gara Itoophiyaa ce’uu isaanii Dhaabbanni Baqattoota Addunyaa [UNHCR] beeksise.
Dubbi-himaan dhaabbata kanaa, waajjira Itoophiyaa, Kisut Gabra’igzaabeer baatii Onkoloolessaa qofa baqattoonni Eertiraa 5000 ol ta’an gara Itoophiyaatti baqachuudhaan koolugaltummaa gafachuu isaanii dhaabbata oduu Anadolu Agency tti himeera. Lammiiwwan Eertiraa gara Itoophiyaatti ce’an keessaa daa’imman 78 akka jiranis dubbateera.
Yeroo ammaatti mooraa baqattoota 4 kanneen qubsuma koolugaltoota Eertiraatiif ijaaraman kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessa akkan jiran beekameera.
Previous articlePaaspoortiin keessan hagam humnaqabeessa?
Next articleTaphni viidiyoo dandeettii dafanii waabarachuu nama gonfachiisa